by Ehlelwe ngu-Adam Stemple
Ukuphucula umdlalo wakho we-Poker ngeZakhono
Ufuna ukuba ngumdlali ongcono, ngokukhawuleza? Landela la macebiso angama-10 ukuze ukhulise ukusebenza kwe-poker kunye nenzuzo. Ngethuba lijongene nabadlali abaqalayo, ezi ngcebiso ze-poker ezona zifanele ukuxhaswa ngexesha elilodwa. Nazi izicwangciso zokufumana imali engakumbi kwii-Texas Hold'em imidlalo yemali .
Musa ukudlala ngasinye Isandla / Yenza Fold More
UJeffrey Coolidge / I-Bank Image / Getty Izithombe
Mhlawumbi inkohlakalo enye iqalisa abadlali be-poker yenza ukuba badlala izandla ezininzi kakhulu. Xa uqala nje ukudlala i-Poker, ufuna ukudlala i-Poker , kwaye oko kuthetha ukuhlala ezandleni ezingekho kakuhle kakhulu ukuba ube yinxalenye yesenzo. Kodwa ukudlala okungakumbi akuthethi ukuphumelela ngaphezulu, ngokuqhelekileyo kuthetha ukulahlekelwa ngaphezulu. Ukuba ufumanisa ukuba uhlala kwisiqingatha okanye ngaphezulu kwezandla ozenziweyo, kufuneka uhlaziye iimfuno zakho zokuqala .
Musa ukudlala iDrunk
Kukho ubusuku apho udlala nje kunye nabahlobo kwiintsika eziphantsi kwaye kuninzi ngokuzonwabisa kunokuba i-Poker. Kodwa ukuba uhlala kwikasino, jonga utywala. Inyaniso kukuba, ngelixa unokuba ukhululekile emva kokusela izibini ezimbini, kunokukhokelela ekubeni udlale udlala ngokugqithiseleyo kwaye ungaphantsi kakhulu, nangona ungadakiwe. Ungabona ukuba bambalwa abanye abadlali etafileni bahamba nonke. Oko kufanele kube yinkcazelo yakho yokuqala yokuba i-poker ayilona umdlalo wokudlala xa udibene neengqondo.
Ungabi yi-Bluff nje ngokuba i-Bluffing's Sake
Uninzi lwabaqalayo baqonda ukuba i-bluffing yinxalenye ye-poker, kodwa kungeyona indlela. Akukho mgaqo ukuba umntu kufuneka ahlawule umlinganiselo othile okanye ngexesha lonke lomdlalo we-poker, kodwa abadlali abaninzi abavumi ukuba baphumelele ngaphandle kokuba bazama i-poker bluff. I-Bluffs isebenza kuphela kwiimeko ezithile kunye nabantu abathile, kwaye ukuba uyayazi ukuba umdlali uhlala ebiza umnqweno, akunakwenzeka ukuba akwazi ukukhupha loo mdlali. Kungcono ukuba ungalokothi ubenze bluff kune-bluff "nje ukuba usebenzise ibluff." Funda kabanzi malunga ne-bluffing dos kwaye ungenzi.
Musa ukuhlala esandleni ngenxa yokuba sele usenayo
Olunye uqhubi oluqalayo lwabaqalayo ukwenza oko kukucinga ukuba "Ewe, sele ndibekile into eninzi ebhodweni, kufuneka ndihlale ngoku." Nope. Awukwazi ukunqoba ibhodwe nje ngokuphonsa imali kuyo. Kungenzeka ukuba kukho iimeko xa i-pot isichaza umnxeba, kodwa ukuba uqinisekile ukuba uyabethwa, kwaye akukho ndlela isandla sakho esinokuphucula ngayo ukuba sisona sandla esona sikhulu, kufuneka ulandele ngokukhawuleza. Imali oye wayifaka embhodini ayikho eyakho, kwaye awukwazi ukuyibuyisela nje ngokudlala ngesandla yonke indlela eya ekupheleni.
Ungafowuni ekupheleni kwesandla "Ukugcina umntu onyanisekileyo"
Abanye abadlali babheka enye ibhetti yokugqibela, jonga isandla, uthi "Ndiyazi ukuba unam, kodwa ndimele ndigcine unyanisekile," njengoko bephonsa ekugqibeleni. Kungakufanele ukuba ubone ukuba umdlali unesandla esimele sawo; ufumana ulwazi oluya kukunceda kamva. Kodwa ukuba uvakalelwa ngokwenene ukuba umdlali unesandla kwaye uyabetha, kutheni umnike enye inkampu yemali yakho? Ezi zibheyi ziya kwandisa ngaphezu kokuhlwa.
Musa ukudlala xa uMad, Usizi, okanye kwi-Mood's Bad Mood
Xa udlala i-poker, akufanele uyenze ukuba ubaleke ekubeni ungadakali okanye unemihla embi kakhulu. Uqala ukujikeleza - udlala emoyeni, kungabi ngqiqo - kwaye awuyi kudlala okusemandleni akho. Ngokufanayo, ukuba ngexesha lomdlalo we-poker, ulahlekelwa ngumkhono omkhulu okanye uphumelele kwaye uzive uhamba, unyuke uze uthathe ikhefu uze uzive ukhululile kamva. Abadlali abadlali baya kuqonda indlela ovakalelwa ngayo kwaye bayisebenzise. Jonga iindlela ezilungileyo ezi-7 zokuphuma,
Qaphela iCards kwiThebhile
Xa uqala ukudlala, kwanele nje ukukhumbula indlela yokudlala kwaye ubeke ingqalelo kwisandla sakho. Kodwa xa ufumene loo nto, kubaluleke kakhulu ukuba ubhekisise oko kwenzekayo kwitheyibhile. KuTexas Holdem , sibone ukuba yintoni esona sihle sinobuchule esinokuba sisifanele ukulungelelanisa. Qinisekisa ukuba uqaphela ukunyanzelisa kunye neendlela ezichanekileyo. Kwi -ekhadini lekhadi eli-7, khawuqwalasele oko kubonakalisa noko abantu bakubophe xa ucinga ngokubabiza abachasi. Qinisekisa ukuba unokukhetha ukuba yiyiphi isandla esinqobayo eTexas Hold'em
Ukuhlawula Abanye Abadlali
Njengoko udlala, enye yezinto ezintle kakhulu ongayenzayo kugcina abachasi bakho, nangona ungekho esandleni . Ukuba uyazi ukuba omnye umdlali uhlala ephakamisa kwindawo ethile, kunye nomnye udlala i- Poker xa ebhuffs, kunye neyesithathu kwisithuba ngasinye sokuvuselela, ungayisebenzisa le nkcazelo kukukunceda ukuba wenze isigqibo malunga nendlela yokudlala ngayo. Emva kokuba uyazi ukuba umdlali 3 uhlala ephinda ekuphakanyisweni kwakhona emlanjeni, yilapho unokwenza ibluff kwaye utshise ibhokhwe. Funda kabanzi malunga nokufunda i-poker .
Musa ukudlala kwiMilinganiselo ePhakamileyo
Kukho izizathu ezininzi zokuba abantu batyelele kumdlalo ogqithiseleyo kunokuba badlala. Izizathu ezilungileyo ezinjengokuwina ngokuqhubekayo kwi-lever ephantsi kwaye zilungele ukunyuka, kwaye izizathu ezimbi ezifana nomgca zifutshane kumlinganiselo ophezulu okanye ufuna ukumnceda umntu. Musa ukudlala kwizigxobo ezikwenza ucinge ngemali yangempela ngokwemihla ngemihla okanye ngemali ongeke uyilahle. Nangona unobusuku obuninzi obuhle kwi $ 2/4, xhathisa umdla wokudlala i-$ 5/10. Inqaku elilandelayo lichaza ngakumbi ukuba kutheni.
Yenza i-Pick i-Game Right kwiNqanaba lakho loKhuseleko kunye ne-Bankroll
Esinye sezizathu onokuthi ungangeni kumdlalo we-5/10 wemali emva kokuwina inqwaba yemali kwi-$ 2/4 kuba kuba njengokuba izitofu ziphakama, kunjalo nenqanaba lekhono labadlali abahleli apho. Ufuna ukuba enye yeyona nto efanelekileyo etafileni, kungekhona intlanzi ehleli phantsi neentlanzi. Ukuba ukwenza utywala lwemali kumdlalo ophantsi, kutheni uhamba? Uphumelela ukutsalwa kwemali . Ukunyuka kwehla nokuhla kumda ophezulu kuninzi kakhulu, kwaye ukuphumelela komsebenzi omkhulu obusuku obunzima akuyi kuhlala ixesha elide kumdlalo ophezulu.
Indlela yokudlala iiJack okanye i-Poker yeVideo engcono
I-New School GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Sonke Isibhalo Siphefumlelwe NguThixo
Indlela Yokuloba "Inkohliso" Inambuzane yeLargemouth Bass
Top 10 Favorite Echo Iingoma